Taratasy avy amin'ny Management Team
MTP-mpo Multi-kofehy Solutions
MTP-mpo Cable Fivoriambe
Matoantenin'ny atao fibre Optic Components
Ferrule amin'ny keramika
Fibre optic damba tady
Cable Management sy Enclosure
Mpamantatra sy ny Tools
INTCERA no vaovao Brand ny Fiberconcepts 'hatramin'ny taona lasa izay. Fiberconcepts dia mpitarika maneran-mpamokatra sy ny mpamatsy ny fibre optic Premium matoantenin'ny atao singa manokana amin'ny tambajotra tsarotra tanteraka. Ny singa sy ny vahaolana dia hita ao amin'ny fampiharana eo amin'ny raharaham-barotra, ny governemanta sy ireo hafa manerana izao tontolo izao. Fiberconcepts, dia naorina tamin'ny 2002 ary ny foibeny any Shenzhen, Shina.
Fiberconcepts nampiasa ny fahaizana ara-teknika mahery mba hamoronana ny vokatra INTCERA ny portfolio. Up mandraka ankehitriny, Fiberconcetps efa lasa mavitrika loharano iray manerantany ho an'ny matoantenin'ny atao Optical interconnect singa.
Ny fahombiazantsika tantara dia tsotra: mihaona amin'ny kalitao ilain'ny mpanjifa nanolotra vokatra ara-potoana, isaky ny amin'ny vidiny mirary tontolo izao amin'ny fanompoana kilasy. Noho ny tsy mety manaiky lembenana ny kalitaon'ny vokatra sy ny fampisehoana, dia efa nanorina fiaraha-mientana ifampizarana mandritra ny fotoana maharitra soa ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny mpanjifa maneran-tany
Amin'ny maha porofo izany fanoloran-tena, dia manolotra isan-karazany ny asa, anisan'izany ny fangatahana fanohanana, vokatra fanofanana, ny fanohanana ara-teknika sy ny fametrahana fanampiana.
Fiberoncepts vokatra mifandray raharaham-barotra, ny governemanta ary ny hafa miaraka amin'ny manam-paharoa fampisehoana avo interconnect vahaolana tohanan'ny vita fanoloran-tena ny tolotra sy ny fampiofanana. Ny manerantany mpanjifa fototra matoky Fiberoncepts 'vokatra sy nandritra ny 10 taona izahay, ary natao isaky ny vokatra vokarina mba hanafaka mitovy tanteraka amin'izay nampanantenainy; isaky ny fihetsiky haingana amin'ny manovaova sy ny fahombiazan'ny. Mpanjifa mifidy Fiberoncepts mahazo miasa akaiky miaraka amin'ny ekipa matihanina ny vita fanoloran-tena faly hanampy isaky ny dingana eo amin'ny dingana. Ny fahalalana sy ny traikefa dia hanampy anao hahita ny interconnect mitaky vahaolana ianao.
Fiberconcetps dia natokana ho manome hihaino mpanjifa sy ny fanohanana, sy ny fifadian-kanina fanaterana vokatra fahalalana fototra naharitra mihoatra ny 10 taona ny traikefa.
Raha toa ianao ka efa misy mpanjifa iray, efa niaina ny haingana delivery, vokatra fahalalana, kalitao fanomezan-toky, ary avo lenta ny fanompoana. Raha toa ianao ka mpanjifa vaovao, antsoy izahay azafady, dia Ho faly amin 'ny tsara sy ny asa fanompoana.
Noho izany, araka ny porofon'ny fanoloran-tena ity, isika dia afaka manao ny INTCERA marika malaza lasa ela.
Pen-Type Visual Fault Locator, MTP SM MM OM4 Patchcords , Polarization Fihazonana MTP-MTP Patch tady , MTP To LC Cassettes , MTP 12F 24F 36F 48F 96F Patchcords , MTP Cable Patch tady ,